Ejypta: Khaled Said, Herintaona Taty Aoriana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Jona 2011 20:17 GMT
Vakio amin'ny teny Nederlands, Español, عربي, Ελληνικά, Français, Italiano, русский, English
Herintaona lasa izay, Khaled Said, Ejyptiana 28 taona avy any an-tanàna amorontsirak'i Alexandria, no nampijalijaliana teo am-pelantanan'ny polisy roa lahy mandra-pahafatiny izay nikaroka azy noho ny lalàna mihatra amin'ny firenena latsaka ankaterena. Niteraka hatezerana lehibe teo amin'ny Ejipsiana ny fahafatesany, saingy tsy nisy olona nieritreritra fa herintaona taty aoriana, dia mihidy ambadiky ny bara-vy i Mubarak, ny minisitry ny Atitany ary ny andry iankinan'ny fitondrana miaramila hafa. Ankehitriny, mahatsiaro ny fitsingerenan'ny iray amin'ny nahatonga ny revolisiona nataony ny Ejipsiana.
@Mohamed_Atwa: #KhaledSaid Misaotra nanomboka ny revolisiona. Misaotra namoha ny maha olona ahy ato anatiko. Allah yer7amak ya rab [Hitahy ny fanahinao ny Tompo]
@mariamarafat: Ho anareo rehetra izay manadino, #KhaledSaid no pitik'afo nampirehitra ny revolisiona. Ny kely indrindra azontsika atao dia ny mahatsiaro azy amin'izao andro izao.
Wael Ghonim nizara ny iray amin'ny sary voalohany tamin'ny fihetsiketsehana manameloka ny fahafatesan'i Khaled Said. Tsy afaka ampitahana amin'ireo Ejyptiana an-tapitrisany maro nidina andalambe nandritra ny#revolisiona Ejipsiana ny olona vitsy nandray anjara. Na dia izany aza izany no pitik'afo nahatonga ny revolisiona taty aoriana.
Ny sasany tamin'ireo nanao fihetsiketsehana tamin'ny herintaona dia sambany vao nanao fihetsiketsehana teo amin'ny fiainany. Ahmed Khair Eldeen nanoratra ny fahafatesan'i Khaled Said nanova ny toe-tsain'ny firenena manontolo, sy ny nahatonga ny tahotra ho tratran'ny nanjo ilay olona no nahery kokoa noho ny tahotra hanao fihetsiketseham-panoherana:
Nanameloka ny fahafatesany ny Amnesty International sy ny Human Rights Watch ary nitaky fanadihadihana momba ny famonoana azy izay feno herisetra. Saingy ankehitriny, volana maro izay no lasa, mbola tsy voasazy ireo tompon'andraikitra tamin'ny fahafatesany sy ireo izay namono ny mpanao fihetsiketsehana nandritra ny revolisiona.
@nagoul1: Ankehitriny misaona izahay #BackInBlack tsy noho i#KhaledSaid ihany fa noho ireo izay namono ny mpanao fihetsiketsehana tamin'ny #Jan25 izay mbola mirenireny any koa.
Farany, Mariam Arafat malahelo fa tsy eto amin'ity tany ity intsony i Khaled Said mba hijery ny fanovana izay nentin'ny fahafatesany, ary ni-tweet i Mai Shams El-Din fa maty ho antsika rehetra i Said.
@maishams: Maty izy mba ahafahantsika mivelona. Mandria am-pidanana [RIP] #KhaledS